"भात खाने बाटो: जनयुद्धको उपज" | NAJ Entertainment
Home Story “भात खाने बाटो: जनयुद्धको उपज”
भात खाने बाटो: जनयुद्धको उपज
ए छोक्रि अच्छे से काम कर्ले, बर्ना सामका खाना नहि मिलेगा !
झ्याप्प हेर्दा कुनै तामिल फिल्मको खलनायक जस्ता देखिने एकजना अधबैंसे मान्छे बैजयन्ती भए तिर हेरेर झर्कदै थिए । मुखमा पानको बुझो च्यापेकाले उसको आवाज निकै भद्दा सुन्निरहेको थियो । त्यस मान्छेको व्यत्तित्व देखेर आसपासका सबै आजित देखिन्थे । उसको न त लुगा लगाउने ढंग थियो न त बोल्ने ढंग नै ।
त्यस मानिसको आवाज कानमा प्रवेश गर्न नपाउदै बैजयन्ती सतर्क भई आफ्नो हात्मा भएको हतौडाले नजिकमा रहेको ढुङ्गा फुटाउदै निश्चिति आकारमा छेउमा जम्मा गर्न थालिन् ।
त्यस मानिसको आवाज सुनेर बैजयन्ती कति पनी डराइनन् । उनी त्यसैमा अभ्यस्त भैसकेकी थिईन् । आफ्नै सुरमा काम गरिरहेका श्रमिकलाई धम्काउने र थर्काउने उसको नित्यकर्म नै थियो । उसलाई काम गरिरहेका मान्छेलाई अनायासै थर्काउने बानी परिसकेको थियो । उ आफुलाई ती श्रमिकहरुको मसिहा ठान्दथ्यो । उसले तिनीहरुलाई काम दिएन भने तिनीहरुको भात खाने बाटो नै टुट्छ भन्ने उसको बुझाई थियो ।
सबै कामदार उ बाट निकै परेसान थिए । भ्यात्त बाहिर निक्लेको भुडीले उसको अजङको शरीरलाई थप कुरुप बनाईरहेको थियो । उसको कपालमा चुहिनेगरी तेल लगाएर बिचमा केश पारेर कोरिएका हुन्थे । ती कपलका छनक देख्दा असिको दशक तिरका पर्दामा हिरोको अगिपछी लाग्ने आसेपासेको आभाष हुन्थ्यो । मुखमा रहेको पानको बुझोले उसको दन्तपङ्ती सेतो दात नभई रातो माटोले लिपिएको पर्खाल जस्तो मात्रै लाग्थ्यो । उ नजिक आएको र बोलेको कसैले मनपराउदैनथे । तर के गर्नु, विवश भएर उसैकोमा काम गर्न जानू पर्थ्यो ।
उसको खास नाम के थियो कसैलाई थाहा थिएन । केहिले उसको नाम नट्टुलाल नामकरण गरिदिएका थिए । उसको अनुपस्थितमा सबै उसलाई त्यही नामले चिन्दथे । उ भने त्यस नामले बोलाउँदा रिसाउँथ्यो तर नट्टु जि भनेर सम्बोधन गर्दा खुसी हुन्थ्यो ।
दिनको दुईतीन पटकसम्म उ कामदारको निरिक्षण गर्न आइपुग्थ्यो । उ कालो ललाट घाममा टल्काउदै आउँदा सबै सतर्क भएर आफ्नो काममा तल्लीन हुन्थे । गफमा भुलिरहेका भएपनि हतार हतार गिट्टी कुटिरहेझै गर्थे ।
उ आएर महिला र स्त्रीहरु भएको ठाउँमा केहिबेर रोकिन्थ्यो र भन्थ्यो, “धिरे धिरे करो ना, काई को जल्दी हे ? अप्नि ख्याल बि कर्लिया करो ना । तुम सब तो मेरि बेहेन और बेटि जेसी हो । मे औरतकि बहुद ईज्जत् कर्ता हुँ ।” उसले यसो भनिरँहदा ती महिलाहरु प्रती कत्तिपनी ईज्जत् झल्कदैनथ्यो । उ त तिनीहरु सङ नजिक हुने बहाना खोजिरहेको मात्र हुन्थ्यो । महिला र स्त्रीहरु उ नजिक आएपछि नाक खुम्च्याउदै उसको शरीर बाट आएको गन्ध छल्ने प्रयास गर्थे । मुखमा कहिलेइ नटुट्ने पान र सुर्ती, कापालमा चुहिनेगरी लगाएको तेल र उसको शरीर बाट आएको गन्धको समिश्रणले उसको नजिकका निकै दिक्क मान्थे ।
माओवादीको लक्ष्य राज्यसत्ता कब्जा गर्नु थियो । कमान्डर भनिरहेको हुन्थ्यो,
“कमरेडहरु सहि बिचारको हतियार लिएर बैज्ञानिक कार्यदिशामा निरन्तर लाग्ने हो भने हामि यो संसार बदल्न सक्छौं । यस संसारलाई अझै सुन्दर, अझै न्यायोचित र मानवीय बनाउन सकिन्छ । हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा माओवादी नेपाली जनतालाई सबैखाले अत्याचार र सामन्तवादको चपेटाबाट मोक्ष दिलाउदै नयाँ र समुन्नत नेपाल बनाउने संकल्पका साथ हाम्रो जनक्रान्ती अगाडी बढाउनेछौ । अब हामी कुनैपनी हालतमा पछि हट्ने छैनौ, हामी सत्ता र राज्य दुबै कब्जा गरेरै छाड्नेछौ, निकट भबिष्यमा त्यो सबै हाम्रो हुनेछ । आफ्नै भलाईका लागि हाम्रो जनक्रान्ती प्रती प्रतिबद्ध हुन म कमरेडहरुलाई क्रान्तिकारी आव्हान गर्दछु ।” कमान्डरको कुराले केहिमा तिब्र अभिलाषा पनि छाएको थियो ।
तर पनि उनी एकसुरले आफ्नो काम गरिरहन्थिइन् । लास जलाएर मलामिहरु घर फर्किए पछि बैजयन्ती लास पोल्ने स्थानमा कोइला र बचेका दाउराहरु संकलन गर्न जान्थिन् । तिनै दाउरा र कोईलाले उनी बेलुकाको खाना बनाउथिन् ।
कुनै दिन लास दजलाउनका लागि आएन भने उनलाई खिन्न लाग्थ्यो । ति दिनहरुमा उनी भोकै सुत्नुपर्ने हुन्थ्यो । जङ्गलमा गएर दाउरा काट्ने सामर्थ्य उनमा थिएन । जङ्गलभरी माओवादीको बिगबिगी थियो । फेरि जङ्गलमा चहार्दै गर्दा छापामार युवती भनेर आर्मीको फन्दामा पनि त पर्न सक्थिन् । त्यसैले पनि मुर्दाघाटको दाउरा र कोईलाहरु उनको भात खाने बाटो बनेको थियो ।
उनको बाबु को थिए स्वयं उनकि आमालाई पनि थाहा थिएन । उनकी आमालाई उनको अनुहार कहिले गाउँको मुखिया सङ मिल्दोजुल्दो लाग्थ्यो, कहिले हवल्दार सङ मिल्दोजुल्दो लाग्थ्यो, कहिले गाउँको सचिब सङ मिल्दोजुल्दो लाग्थ्यो, कहिले स्कुलका हेड्मास्टर सङ मिल्दोजुल्दो लाग्थ्यो त कहिले नट्टुलाल सङ पनि मिल्दोजुल्दो लाग्थ्यो । उनी तिनीहरु मध्य जोसुकैलाई भेट्थिन् हरेकमा बैजयन्तीको बाबुको सुगन्ध पाउथिन् । उनलाई आफ्नो छोरीको अनुहार तिनीहरुमा प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो । यो कुरा बारे उनी सधैं अनबिज्ञ भैरहिन्, ती मध्य कुन चाहिँ हुन् बैजयन्तीको बाबु ।
गाउँभरि त्यस्ता कयौं बैजयन्तीहरु थिए जसका आधिकारिक बाबु थिएनन् । माथी उल्लिखित मध्य कुनै एक हुन्थे तिनका पिता तर ठ्याक्कै कुन चाहिँ भन्ने निक्र्योल कसैमा हुदैनथ्यो । कुनै पिताहरु धेरै बैजयन्तीहरु उत्पादन गर्नमा सघाउथे तर त्यस्को श्रेय लिन तयार रहदैनथे ।
बैजयन्तीकि आमा केही बर्ष अघि जनयुद्धमा होमिएकी थिईन् । माओवादीले हरेक घरबाट एकजना आफ्नो सेनामा भर्ती हुनुपर्ने बिगुल फुकेपछी उनिनै लागेकी थिईन् । आसपासकै गाँउहरुमा सेल्टर पर्दा उनी बिस्कुट, चाउचाउ र अन्य केही समानहरु बोकेर बैजयन्तीलाई भेट्न आईरहन्थिन् । बैजन्ती पनि आफ्नो आमालाई देखेर निकै हर्षित र पुलकित हुन्थिन् । पछिपछिका दिनहरूमा उनी बन्दुक भिरेरै छोरिलाई भेट्न आउन थालिन् । अब भने उनि साँच्चिकै लडाकु भएकी थिइन् । उनले पाईला पाईलामा सुरक्षा अप्नाउनुपर्ने थियो नत्र तलमाथि जे पनि हुन सक्थ्यो । छोरि सामु त्यसरी बन्दुक भिरेर प्रकट हुने मन उनलाई कत्तिपनी थिएन तर कमान्डरको आदेश अनुरुप उनी त्यसो गर्न बाध्य थिईन् । बन्दुक भिर्ने भएपछि उनी बिरलै छोरिलाई भेट्न आउने गर्थिन् । महिनामा बढिमा एकचोटी पनि बल्ल बल्ल आउने मौका मिल्थ्यो । घर आएको बेलामा उनी छोरीलाई भन्थिन्, “नानी अब हाम्रो युद्ध सफल भएपछि अध्यक्ष कमरेडले हामीलाई काठमाडौं बस्ने र जागिरको ब्यबस्था मिलाईदिनुहुनेछ ।”
गाउँ पनि हुँदाहुँदै सुनसान जस्तै भएको थियो । गाउँका सबैजसो युवायुवती र जवानहरु जनयुद्धमा होमिएका थिए । कोहि बाध्यताले त कोहि रहरले । अलिअलिमा डर पनि थियो । माओवादी वा आर्मी, पुलिस जोसुकैले चाहेको खण्डमा अपहरणमा पार्न सक्थे । माओवादी युद्धको ढाँचा हेर्दा न त कुनै रास्ट्रभत्ती झल्किन्थ्यो न त कुनै खास परियोजनका लागि गरिरहे झैं लाग्थ्यो । भन्न त उनिहरु भनिरहेका हुन्थे, यस जनयुद्धले आम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ र सबै देश बासीलाई नयाँ बिहानी दिनेछ ।
आमा बारे खबर आएको कुरा सुन्ने बित्तिकै उनी काम गरिरहेको ठाउँबाट जुरुक्क उठेर एक झलक नट्टुलालको आँखामा हेरिन् । कुनै समय सबै कामदार नट्टुलाल माओवादीको सुराकी भनेर संखा गर्थे । सबै जन उनको कुरा काटिरहन्थे । उनले पनि हो मा हो मिलाएकी थिईन् । त्यस कुराप्रती बैजयन्तीलाई घोर ग्लानी भयो ।
त्यस समुहबाट एउटा अलि परिपक्व र शालीन जस्तो लाग्ने युवा बैजयन्ती नजिक आयो र भन्यो,
“बैजयन्ती तिमी हौ ?”
बैजयन्ती निर्निमेष त्यस युवब तर्फ हेरिरहिन् । उनी त्यस युवक सेनाबाट थप अरु कुरा सुन्न चहान्थिन् ।
उ फेरि भन्न थाल्यो, ” हेर बैजयन्ती तिमी खुसी हौ, तिम्रो आमाको नाम ईतिहासको पानामा लेखिएको छ । शताब्दी शताब्दीसम्म पनि तिम्री आमाको नाम अमर रहिरहनेछ । ”
आमाको बारे त्यस्तो खबर सुन्दा उनी भित्रभित्रै सोचमग्न भईन तर उनको आवरणमा झट्ट कुनै परिवर्तन आएन । यश बाट प्रष्ट हुन्थ्यो उनी निकै कठोर हृदयको भैसकेकि थिईन् । आमा सहिद भएको र सारा देशले चिन्ने कुराले उनी केही खुसी भएकी थिईन् तर त्यो भन्दा कयौं गुना बढी दुखी आमाको वियोगमा भएकी थिईन् ।
त्यति भनेर ति सेनाका युवायुवतीहरु त्यहाँबाट आफ्नो स्थानतिर लागे । एकजना युवती भने समुहको पछाडि थिईन् । जादाजादै उनले बैजयन्तीलाई भनेकी थिईन्, “हेर बैजयन्ती हामी पनि तिम्रो जस्तै पीडाले ग्रसित छौं । धेरै दुखी नहोउ, हामी छौँ ।”
केहि दिनपछि तिनै सेना कम्ब्याट ड्रेसमा उनको घर अगाडि उपस्थित भए । यसपटक तिनिहरु अलिक गम्भीर मुद्रामा थिए ।
उहि पहिलेको परिपक्व र शालीन जस्तो लाग्ने युवा उनको अघि आयो र भन्न थाल्यो, “बैजयन्ती तिम्री आमाको दुश्मन द्वारा हत्या भएको हो । तिनीहरुले तिम्री आमाको निर्मम हत्या गरेका हुन् । तिनीहरु अब हाम्रो मात्र नभएर तिम्रो पनि दुश्मन हुन् ।”
बैजयन्ती निकैबेर घोत्लिरहिन् । “को हुन् ती दुश्मन ?” बैजयन्तीले नचहाँदा नचहाँदै निकै मलिन आवाजमा प्रश्न गरिन् ।
“ती दुश्मनहरु आर्मी र पुलिसहरु हुन् । तिनीहरुले हामीलाई आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्नबाट बन्चित गरिरहेका छन् । आफुलाई देश र जनताको रक्षक भन्छन् तर देशकै भलाईको निम्ति गरिरहेको कार्य आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी देशमा आम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा छौ । हामी चहान्छौ नेपाली जनता भोकभोकै बस्नु नपरोस्, सामान्य उपचार र औषधिसमेत नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस्, सबै जनताको छोराछोरीले पढ्न पाउने अवस्था होस्, राष्ट्रिय ढुकुटीमा सबै जनताको समान पहुँच होस् र जनतालाई यथोचित न्याय उपलब्ध होस् । तर तिनीहरु त्यस कुराको पक्षमा छैनन् । जनताको संगठित शक्तिले मात्र यी सबैकुरा आम जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ ।”
एकदिन जङ्गलमा डुल्ने क्रममा उनी लगायत उनको साथी दुश्मनको आशपासमै पुगे । त्यो कुराको चाल पाउनासाथ दुश्मन पनि सकृय भएर आक्रमण थालिहाल्यो । लामो समयसम्म दुबै पक्षबिच दोहोरो भिडन्त भैरह्यो । दुश्मन तर्फ बाट प्रहार भएको गोलि सिधै आएर बैजयन्तीको छातिमा ठोक्किन पुग्यो । गोलि लाग्नासाथ बैजयन्ती बतासले ठुलो रुख ढालेझै डङरङ्ग ढलिन् । उनी लडेपछी निकैबेरसम्म दोहोरो भिडन्त चलिरह्यो । कयौं घाइते भए त कयौं सहिद भए । अब समबेदना प्रकट गर्दै युद्धको बहकाउमा लगाउन बैजयन्तीका कोहि थिएनन् ।
त्यस्को केहि समय पछी शान्ति सम्झौता भयो । त्यसै दिनबाट बैजयन्ती नामक पात्र युद्धको रुमानी दुनियाँमा हराएर गईन् । युद्ध सकिएपछि आम जनतालाई पहिलेभन्दा केहि सहजता भयो । देश पुरानै अवस्थामा फर्कियो । शान्ति सम्झौता पछि बैजयन्ती र उनकी आमाको नाम कहिलेई सुन्निएन । तिनीहरुको फोटो पार्टी कार्यलयको कुनै अँध्यारो भित्तामा सिमित भए । युद्ध सकिएपछि अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री पनि भए तर उनले बैजयन्तीकि आमाको नाममा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा कहिलै सुन्नमा आएन ।
Story by: Bishal Dutta Bhatta
Previous articleThe Ring- A Mysterious Story
Next articleWedding In Mangsir | Mangsir Vibes